Manatsara ny hafainganam-pandefan'ny backup | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo tsara indrindra, raha tsy ny mpitantana sary maimaimpoana tsara indrindra izay azontsika jerena ao amin'ny App Store, Google Photos, izay vao nohavaozina manampy fiasa vaovao izay hahafaly ireo mpampiasa tsy tapaka ity fampiharana ity. Ny Google Photos dia nanjary ny safidy tsara indrindra amin'ny iCloud, ankoatry ny maimaim-poana, afaka mitahiry ny sary sy horonan-tsary tsirairay alaina miaraka amin'ny fitaovantsika, raha mihoatra ny 16 mpx ny sary (miaraka amin'ny iPhone tsy misy ny olana) ary ny kalitao tsy misy kalitao 4k (navadika ho 1080 izy raha tsy tianay hampiasa ny toerana fitahirizanay izy ireo).
Aorian'ny andro iray izay tsy maintsy nampiasanao ny iPhone hakanao sary marobe, ankoatry ny fandraisam-peo ny horonan-tsary hafahafa dia apetrakao ny iPhone hampiasanao vola amin'ny fomba anaovana ny fifandraisana Wi-Fi ireo sary sy horonan-tsary izay nataonay. Ity fizotra ity, miankina amin'ny isan'ny sary sy horonan-tsary, mety ho miadana be izy io, farafaharatsiny hatreto.
Google dia nanavao ny fampiharana fotsiny fanatsarana ny rafitra fiakarana noho ny fiakarana mitovy, izay ahafahanao mampakatra rakitra maromaro miaraka fa tsy mandeha iray toy ny taloha. Fa koa, ireo tovolahy ao amin'ny Google dia nanatsara ny fomba fiasa amin'ilay toerana nalaina sary. Aorian'ity fanavaozana ity, rehefa manindry ny toerana misy ny sary ianao dia hisokatra ho azy ny rindranasa Google Maps mba hampisehoana ny toerana tena nakana azy.
Azo alaina maimaimpoana ny Google Photos amin'ny alàlan'ny App Store ary ahafahantsika mitahiry kopia iray amin'ny fihodinananay manontolo maimaim-poana nefa tsy manadino ny toerana nifanarahanay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Google Photos manatsara ny hafainganam-pandeha fampidinana backup
BeatsX dia misy amin'ny Apple Music mandritra ny telo volana maimaim-poana